Rita, Writing for My Sake!: If you fall in love...
Posted by Rita at 7/09/2009 10:16:00 AM
၂၀ အောက်တွေသာ ဖတ်ပါဆိုတာတွေ့ တဲ့အချိန်မှာ ရေးထားသမျှ အကုန်လုံးဖတ်ပြီးသွားပြီ။
မှတ်ချက်က နောက်ဆုံးမှာ သွားရေးထားတော့ ဖတ်ပြီးမှ မှတ်ချက်ကို မြင်တော့တာပေါ့ ဒေါ်ရီတာရဲ့။ အဲသည်လို အသက်ကြီးသူတွေကို Discriminate မလုပ်ပါနဲ့။ အားငယ်တယ်။
ဖတ်ပြီးမှတွေ့ တာနော်။ အသက်၂၀အော်ဆိုတာ။
20 အောက်ဖတ်ဖို့ရေးထားတာ 40 အောက်ဝင်ဖတ်သွားပါတယ်။ ပြုံးမိတယ်၊ သဘောကျတယ်...။
ဒါ အရူးအမူးဖစ်နေတဲ့ ကာလပေါ့..။
ဟိဟိ နောင့် ကကျော်ကာစ ဆိုတော့ ဖတ်လို့ ရသေးလား ပဲ ..ဒါပေမယ့် ဖတ်ပြီးပြီ...ငယ်ငယ်တုန်း ကအဲ့လို ပဲ...း)
အားလုံးဖတ်ပြီးခါမှ ဝမ်းနည်းဖွယ်အဖြစ်နဲ့ ကြုံရတော့တယ်...
အမှန်ကတော့ ချစ်မိပြီဆိုရင် အသက်အရွယ်နဲ့ မဆိုင်... ဒါတွေဟာ Universal Truth ပါ ဒေါ်ရီတာရေ့...
ချစ်မိရင် နှစ်ခါရုံးသတဲ့ ဒါကြောင့် ပုလုကွေး ဘယ်သူကို မှ မချစ်...
နှစ်ဆယ်အောက် .. :) ပုလုကွေးက ခုမှ ၁၀နှစ်ထဲရယ်...
ဟယ်... ရီတာမမ နာ့ကိုများ မြင်သွားလား မသိဘူး။
ဘယ်တုန်းကတည်းက နောက်ယောင်ခံ လိုက်ကြည့်နေသလဲနော်။ ပါပါရာဇီ ရှုံးလောက်တယ်။ ရေးထားတာတွေက နာနဲ့ ကွက်တိပဲ။ ရှက်တော့ မရှက်ပါဘူး။ အရှက် မရှိတာ ကြာလှပေါ့။ အဟက်...
အဲဒီလိုများ ပြောမိရင် ဇူလိုင်တစ်ယောက် သောက်ပေါလို့ ထင်ကြအုံးမယ်လေ။ ထင်ချင်သလို ထင်ပါစေလေ။ အဟက်... အဟက်...
ဒီဘလော့ကို လာဖတ်တဲ့သူတွေ ၂၀အောက် တစ်ယောက်မှပါတယ်မထင်ဘူး။ အဟက်။
နောက်တခါ ၂၀ ကျော်၊ ၃၀ ကြား အတွက်လည်းရေးပါဦးဗျို့။
မောင်၊ကိုကို၊မမရီတာ ...ဆက်ရန်လေးတွေ မျှော်နေတယ်။
တော်ပါသေးရဲ့  ကျော်ဖတ်မိလို့...
အသက် (၂၀) အောက် လူငယ်များ၏ မိဘအရွယ်များ ဖတ်ရန်ဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်။ :P
ခုမန့်နေကြတဲ့ မြီးကောင်ကျွတ်ကြီးတွေအတွက် တစ်ပုဒ်လောက်။
အသက် ၂၀+၂၀ အောက် မမဖတ်သွားပါတယ်ကွယ်.း)
အသက်ကတော့ ၂၀ ကျော်ပြီ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ အချက်တွေ လုပ်နေမိတုန်း ...
အထူး သဖြင့် ၁ နှင့် ၁၁ ဖြစ်မည် ထင်သည် ..